လန်ဒန်တံတား - တိုက်ခိုက်မှု ကျူးလွန်သူဟာ ခံဝန်နဲ့ထောင်က လွတ်လာသူ ဖြစ်လို့ အများက မေးခွန်းထုတ်
လန်ဒန်တံတား - တိုက်ခိုက်မှု ကျူးလွန်သူဟာ ခံဝန်နဲ့ထ...
30 พ.ย. 2562 - 19:23 น.
လန်ဒန်တံတားပေါ်မှာ နိုဝင်ဘာ ၂၉ရက် သောကြာနေ့က တိုက်ခိုက်မှု ကျူးလွန်ခဲ့သူဟာ အရင်တုန်းက အကြမ်းဖက် ပြစ်မှုနဲ့ ထောင်ကျဖူးသူတယောက် ဖြစ်တယ်လို့ ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောပါတယ်။
တိုက်ခိုက်မှု ကျူးလွန်သူရဲ့ အမည်က အူစမန်ခန်း လို့ ရဲက ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး သူဟာ အသက် ၂၈နှစ် ရှိသူပါ။
အခင်း ဖြစ်ပွားချိန်မှာ သူ့ကို ခံဝန်ချက်နဲ့ ထောင်က ပြန်လွှတ်ပေးထားတာ ဖြစ်တယ်လို့ ရဲထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
လန်ဒန်တံတား တိုက်ခိုက်မှုမှာ နှစ်ဦးသေ
သောကြာနေ့က လန်ဒန်တံတားပေါ် တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အမျိုးသား တယောက်နဲ့ အမျိုးသမီးတယောက် သေဆုံးပြီး လူသုံးယောက် ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။
တိုက်ခိုက်မှု ကျူးလွန်တဲ့ အူစမန်ခန်းကို အနားက ဖြတ်သွား ဖြတ်လာတွေက ဖမ်းချုပ်ထားခဲ့ပြီးနောက် သူဟာ ရဲ အရာရှိတွေရဲ့ လက်ချက်နဲ့ သေဆုံးသွားပါတယ်။
အဲဒီ တိုက်ခိုက်မှုကို အကြမ်းဖက်မှု အဖြစ် ရဲက ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ခန်းဟာ ၂၀၁၂ တုန်းက အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ ထောင်ချခံထားရသူလို့ လန်ဒန်ရဲ ဌာနက လက်ထောက် ကော်မရှင်နာ မင်းကြီး နီးလ် ဘတ်ဆူက ပြောပါတယ်။
၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာတုန်းက ခန်းကို ခံဝန်နဲ့ ပြန်လွှတ်ပေးထားတာ ဖြစ်တယ် ၊ သေချာတာကတော့ ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို သူဘယ်လို ကျူးလွန်ခဲ့တယ် ဆိုတာကို စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ စတင် ဆောင်ရွက်နေပါပြီလို့ နီးလ် ဘတ်ဆူက ပြောကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ခန်းရဲ့ လှုပ်ရှား သွားလာမှုတွေကို ခြေရာခံ စောင့်ကြည့်နိုင်တဲ့ ၊ ခန္ဓာကိုယ်မှာ တပ်ဆင်ထားရတဲ့ electronic tag ကို ဝတ်ဆင်ထားဖို့ သူက သဘောတူခဲ့ပြီးနောက် မနှစ်တုန်းက သူ့ကို ထောင်က ပြန်လွှတ်ပေး ထားတာ ဖြစ်တယ်လို့ The Times သတင်းစာမှာ ရေးသားထားပါတယ်။
တရားဥပဒေအရ ထိုက်သင့်တဲ့ ပြစ်ဒဏ် တချို့ ကျခံပြီးတဲ့ သူ့ကို ဥပဒေအရ အလိုအလျောက် ခံ၀န်နဲ့ ပြန်လွှတ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်လို့ ခန်း လွတ်မြောက်နေမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြစ်ဒဏ် မပြည့်မီ ကတိခံဝန်ချက်နဲ့ အကျဉ်းသား ပြန်လွှတ်ပေးရေး ဆိုင်ရာ ဘုတ် အဖွဲ့က ပြောပါတယ်။
အခု နောက်ဆုံး လန်ဒန် တံတားပေါ် ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆက်စပ်မှုတွေကို ဖော်ထုတ် နိုင်ဖို့ လန်ဒန်မြို့ Stafford အရပ်မှာ ရှိတဲ့ တိုက်ခန်းတွေကို ရဲ အရာရှိတွေက ရှာဖွေနေကြပါတယ်။
စုံစမ်း စစ်ဆေးမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ အခုအချိန်မှာ ထုတ်ပြန်ဖို့ စောလွန်းပါသေးတယ် ၊ ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ တစုံတယောက်ကို အပြင်းအထန် လိုက်လံ ရှာဖွေမှုမျိုး ခုချိန်မှာ မရှိသေးပါဘူးလို့ ရဲမင်းကြီး မစ္စတာ ဘတ်ဆူ က ပြောပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာ တခြာသူတွေ ပါဝင်မှုရှိမရှိ ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ ဆက်လက် စုံစမ်း နေပါတယ် ၊ လက်ရှိတော့ လူထုကို ခြိမ်းခြောက်နိုင်မယ့် ထင်ရှားတဲ့ အချက်အလက်တွေတော့ မတွေ့ရသေးပါဘူးလို့ သူက ဆိုပါတယ်။
နို၀င်ဘာ ၂၉ ရက် သောကြာနေ့ လန်ဒန် စံတော်ချိန် နေ့လယ် ၂နာရီ ဝန်းကျင်လောက်မှာ လန်ဒန် တံတား မြောက်ဖက်နားမှာ ရှိတဲ့ Fishmongers' Hall အဆောက်အအုံမှာ တိုက်ခိုက်မှု စတင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါ။
အခင်း စတင် ဖြစ်ပွားတဲ့ နေရာဟာ Learning Together အတူတကွ လေ့လာ ဆည်းပူး ကြစို့လို့ အမည်ရတဲ့ အကျဉ်းသား ပြန်လည် ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ ကိန်းဘရစ် တက္ကသိုလ်ရဲ့ ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပတဲ့ နေရာ ဖြစ်ပါတယ်။
လန်ဒန်မြေအောက်ရထား ပေါက်ကွဲမှု ကို အကြမ်းဖက် မှု အဖြစ်စုံစမ်း
အဲဒီ အခမ်းအနားကို ကျောင်းသားတွေ၊ အကျဉ်းသားဟောင်းတွေ အပါအဝင် လူတွေ ဆယ်ဂဏန်း တက်ရောက်ခဲ့ပြီး သံသယ တရားခံ ခန်း ဟာလည်း အဲဒီ အခမ်းအနားကို တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
လန်ဒန် တံတားပေါ်မှာ တိုက်ခိုက်မှု မဖြစ်ခင် အခမ်းအနား ကျင်းပတဲ့ အဆောက်အအုံထဲမှာ တိုက်ခိုက်မှု စတင် ဖြစ်ခဲ့တာလို့ နားလည်ရကြောင်း မစ္စတာ ဘတ်ဆူ က ပြောပြီး လန်ဒန် တံတားပေါ်က ဖြစ်ရပ်မှာ ခန်းဟာ ရဲနဲ့ ရင်ဆိုင် ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်ခဲ့ပြီး ရဲရဲ့ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် သေဆုံးသွားတာ ဖြစ်တယ်လို့ မစ္စတာ ဘတ်ဆူက ဆိုပါတယ်။
အခုတော့ အခင်းဖြစ်ပွားရာ နေရာမှာ လန်ဒန် ရဲတပ်ဖွဲ့က ကင်းလှည့်မှု လုံခြုံရေး အကာအရံတွေ ချထားမှုတွေကို အရှိန်မြှင့် လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လူထု အနေနဲ့ တတ်နိုင်ရင် အဲ့ဒီ နေရာကို ရှောင်ပြီးသွားဖို့နဲ့ တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ စုံစမ်း စစ်ဆေးရေးကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေမယ့် သတင်းတစုံတရာ ရှိခဲ့ရင် သက်ဆိုင်ရာကို အသိပေး အကြောင်းကြားဖို့ ရဲက မေတ္တာ ရပ်ခံထားပါတယ်။
တိုက်ခိုက်သူကို အနီးတဝိုက်က လူတွေက ဖမ်းချုပ်ကာ မြေပြင်ပေါ်မှာ လှဲချထား
အခင်းဖြစ်ပွားမှု အတွင်း အမျိုးသား တယောက်နဲ့ အမျိုးသမီး တယောက် သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ ရဲမင်းကြီး မစ္စတာ ဘတ်ဆူက အတည်ပြု ခဲ့ပြီး ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး ၂ယောက် အမျိုးသား တစ်ယောက် ကတော့ ဆေးရုံမှာ ကုသမှု ခံယူနေရ ပါတယ်။
အဲဒီအထဲက တစ်ယောက်က ဒဏ်ရာ ပြင်းထန်တယ်လို့ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှု အဖွဲ့ NHS အကြီးအကဲ ဆိုင်မွန် စတီဗင်စ် က ပြောပါတယ်။ တယောက် အခြေအနေက တည်ငြိမ်စ ပြုလာပြီး ကျန် တယောက်ကတော့ ဒဏ်ရာ အနည်းငယ်သာ ရခဲ့သူ ဖြစ်တယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
သေဆုံးသူ ၂ယောက်ထဲက ကျန်တယောက်နဲ့ ဒဏ်ရာရသူတွေရဲ့ အမည်တွေကိုတော့ သက်ဆိုင်ရာက ထုတ်ပြန်တာ မရှိသေးဘဲ ၊ သေဆုံးသူ တယောက်က ဘယ်သူလဲ ဆိုတာ သိရဖို့ ဆက်လက် စုံစမ်း ဖော်ထုတ်နေတယ်လို့ လန်ဒန် ရဲ တပ်ဖွဲ့ ကော်မရှင်နာ Cressida Dick က အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့ နေ့က ပြောပါတယ်။
အခင်းစတင် ဖြစ်ပွားတာကတော့ လန်ဒန် တံတား နားက အဆောက်အအုံမှာ စတာ ဖြစ်
အခု နောက်ဆုံး လန်ဒန် တံတားပေါ်က တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်စဉ် အတွင်း တိုက်ခိုက်မှု ကျူးလွန်သူကို ၀င်ရောက် နပမ်းလုံးကာ လက်ထဲက ဓားကို ရယူပေးခဲ့တဲ့ အနားတဝိုက်က လူတွေရဲ့ ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ချက်ကို သူရဲကောင်း လုပ်ရပ် အဖြစ် ကော်မရှင်နာ မစ္စဒစ် ၊ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် ဂျရမီ ကိုဘင်နဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဘောရစ် ဂျွန်ဆင် အပါအဝင် လူထုက ဝိုင်းဝန်း ချီးမွမ်း နေကြပါတယ်။
လူမှု ကွန်ရက်မှာ တက်လာတဲ့ ဗီဒီယို ထဲမှာ လမ်းသွား လမ်းလာတွေက ခန်းကို ဝိုင်းချုပ်ထားတာ တွေ့ရပြီး ကုတ်အင်္ကျီနဲ့ အမျိုးသား တယောက်က ခန်း လက်ထဲက ဓားကြီးကို ဆွဲယူပေးနိုင်ခဲ့တာကိုလည်း မြင်ရပါတယ်။
อัลบั้มภาพ လန်ဒန်တံတား - တိုက်ခိုက်မှု ကျူးလွန်သူဟာ ခံဝန်နဲ့ထောင်က လွတ်လာသူ ဖြစ်လို့ အများက မေးခွန်းထုတ်